Tafsiira Suuratu Al-Ankabuut-Kutaa 5 - Ibsaa Jireenyaa
July 25, 2020 Sammubani Leave a comment
Rabbiin Qofa Gabbaruun Karaa Rizqii fi wanta barbaadan ittiin argataniidha
Ilmi namaa halkanii guyyaa rizqii soqachuuf oli gadi kaata. Yommuu rizqii dhabuu ykn jalaa xiqqaatu gara humna ghaybi (ijaan hin mul’anne) rizqii naaf kenna jedhee yaadutti deemun isaaf of gadi qaba. Tarii wanti inni rizqii naaf kenne jedhe sagaduuf kuni wanta homaayyu hin hojjanne ta’uu danda’a. Nabii Ibraahim (aleyh salaam) ummata isaa kana hojjatan irratti jibbuun Rabbii Tokkicha rizqii namaaf kennu danda’uuf akka gadi of qabanii fi sagadaniif isaan gorse:
Yommuu Ibraahim (aleyh salaam) ummata isaatiin akkana jechuun waame yaadadhu: ibaadaa Rabbi qofaaf qulqulleessaa, wanta Inni dirqama isin irratti godhee hojjachuu fi Isa faallessuu irraa fagaachun dallansuu Isaa irraa of eegaa. Yoo kan beektan taatan Rabbiin gabbaruu fi Isa sodaachutu isiniif caala. Dhugumatti, Rabbiin gabbaruu fi Isa sodaachuu dhiisu keessa kheyriin homaatu hin jiru. Rabbiin gabbaruu fi Isa sodaachuun namootaaf garmalee gaarii kan ta’eef addunya fi Aakhiratti kanaan malee badhaasa Isaa hin argatan. Kheeyrin hundi addunyaa fi Aakhira keessatti argamu bu’aa ibaadaa fi taqwaati.
“Yoo kijibsiiftan, dhugumatti ummattoonni isiniin duraa kijibsiisanii jiru. Itti geessu ifa ta’e malee Ergamaa irra homtu hin jiru.” Suuratu Al-Ankabuut 29:18
Yaa namoota! Ergamaa Keenya Muhammadin sallallahu aleyh wassallam yoo kijibsiiftan, isin dura ummattoonni darban Ergamtoota isaanitti ergaman kijibsiisanii jiru. Kanaafu, dallansuun Rabbii isaanitti bu’e. Dirqamni Ergamaa irra jiru Rabbiin irraa ergaa Isaa itti geessu ifa ta’e isinitti geessu qofa. “Itti geessu ifa ta’e” jechuun wanti barbaadame nama dhageefatuuf ifa kan ta’uu fi hiikni barbaadame kan irraa hubatamuudha.
Jalqaba Kan Uume Lamuu Deebisuun Isatti ni ulfaataa?
“Sila akkamitti Rabbiin uumuu akka jalqabu ergasii isa deebisuu hin arginee? Dhugumatti, kuni Rabbiin irratti salphaadha.” Suuratu Al-Ankabuut 29:19
Sila namoonni du’aan booda kaafamu morman ykn shakkan, Rabbiin akkamitti uumamtoota uumuu akka jalqabu hin arginee? Biqiltootaa fi midhaan sanyii keessaa ni biqilcha, lubbu-qabeenyi copha bishaan saalaa irraa ni uuma. “Ergasii isa deebisa.” Kana jechuun Rabbiin akkuma yeroo jalqabaa uume uumamni kuni erga badee fi bututee booda ni deebisa. Kuni Isarratti hin ulfaatu. “Dhugumatti, kuni Rabbiin irratti salphaadha.” Kana jechuun uumamtoota uumuu jalqabuu fi erga badanii booda deebisuun Rabbiin irratti salphaadha. Sababni isaas, Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa wanta tokko uumuu yoo barbaade, “Ta’i” jechuuni qofa. Wanti sunis yoosu ta’ee argama.
Jedhi, “Dachii keessa deematii akkamitti [Rabbiin] uumuu akka jalqabee ilaalaa. Ergasii Rabbiin uuminsa dhumaa uuma. Dhugumatti, Rabbiin wanta hundaa irratti Danda’aadha.” Suuratu Al-Ankabuut 29:20
Kana jechuun namoota du’aan booda kaafamutti hin amanneen akkana jedhi: Dachii keessa deemaatii Rabbiin akkamitti uumamtoota uumuu akka jalqabee ilaalaa, qoradhaa. Isaan ala uumamtoota kanniin kan uume Khaaliqni biraa ni jiraa?
Dachii keessa deemun uumamtootatti xinxalluun: takkaa miilaan lafa keessa deemun wanta arganitti xinxalluu takkaa immoo kitaaba waa’ee uumama lubbu-qabeenyi dubbatu dubbisuun qalbiin itti xinxalluun ta’a.
Dachii keessa deemun uumamtootatti xinxalluutti ajajuun faayda baay’ee qaba: namni wanta naannawa isaa yeroo hundaa waan arguuf bartee ykn aadaa godhatee jira. Barnoota hangas mara irraa hin fudhatu. Garuu yommuu dachii keessa deemuu fi wanta haarawa arguu, itti xinxalluu jalqaba. Namni gamni akkana jechuun xinxalla. “Uumamni kuni duraan kan hin jirre ture. Ergasii haala ajaa’ibaa kanaan ni uumame. Kanaafu, eenyutu uumama kana argamsiise ykn uumee? Wanti duraan hin jirre ofiin of uumu waan hin dandeenyeef Khaaliqni isa uume jiraachu qaba. Khaaliqni kuni wanta duraan hin jirre erga uume, wanta bade lamuu uumuu ni dadhabaa? Gonkumaa hin dadhabu. Jalqaba uumuu kan danda’e lamu deebisee uumuu irratti danda’aadha.” Kanaafi itti aanse ni jedha: “Ergasii Rabbiin uuminsa dhumaa uuma.” Kana jechuun uumamtoonni erga badanii booda Rabbiin yeroo kaafamaa uuminsa biraa isaan uuma. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa uumamtoota jireenya jalqabaa keessatti uume hunda erga balleesse booda Guyyaa Qiyaamaa isaan kaasa. Erga isaan balleesse booda lamuu isaan uumun homaa Isarratti hin ulfaatu. Sababni isaas, “Rabbiin wanta hundaa irratti Danda’aadha.”
 Tafsiiru Muyassar-398, Tafsiir Sa’dii-737 Tafsiir Qur’aanil Kariim-Suuratu Ankabuut-fuula 67-68, Ibn Useymiin Tafsiiru Muyassar-398 Ma’aariju tafakkuri wa daqaa’iqu tadabburi-15/239 Tafsiir Qur’aanil Kariim-Suuratu Ankabuut-fuula 72, Ibn Useymiin Tafsiir Sa’dii-737 Tafsiir Muyassar-398, Tafsiir Xabarii-18/376 Ma’aariju tafakkuri wa daqaa’iqu tadabburi-15/240 Zaadul Masiir-1080  Tafsiir Qur’aanil Kariim-Suuratu Ankabuut-fuula 82, Ibn Useymiin